မေ 1, 2013 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 44 comments
သွားဦးမယ်, ကျနော်တို့ suckers ခဲ့ကြသည်… 🙁
ထို wordpress ကို repository ကိုသွားပြီးနောက်အနှစ်လေး, နှင့် 189,795 downloads, နောက်ပိုင်းတွင်, Transposh အ wordpress.org repository ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည်.
ကြည့်ရသည်မှာ, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ widget ကကျွန်ုပ်တို့၏ site link တခုကိုခဲ့, ကဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့, ဤ wordpress.org လမ်းညွှန်ချက်များဆန့်ကျင်ခဲ့သည်.
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့လက်မခံနိုင်သည့်လမ်းညွှန်ဖြစ်, ငါတို့အလုပ်အတွက်ခရက်ဒစ်ထိုက်သည်ဟုယုံကြည်. twitter ထက်မနည်း, facebook မှာ, သို့မဟုတ်အခြားလူသိများကုမ္ပဏီထွက်တတိယပါတီရှိဝစ်ဂျက်များပေးအပ်.
ငါတို့ plugin ကိုအသိပေးခြင်းမရှိဘဲဖယ်ရှားခံရမည်သည့်အချက်ကိုလက်မခံနိုင်, မည်သည့်အချိန်မပါဘဲအပြောင်းအလဲဖြစ်စေခြင်းငှါ, ညာဘက်အပြာများထဲက.
ကျနော်တို့၏ moderator သူတို့ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော် plugin ကိုဖိုရမ်တစ်ခုမှာတင်ထားတဲ့ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျများဖယ်ရှားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ကိုလက်မခံနိုင်, သို့မဟုတ်ယင်းသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆန့်ကျင်သူတို့ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်. သူတို့ပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုမည်မဟုတ်ပါစည်းမျဉ်းများ.
ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, နောက်ဆုံးတော့, ၎င်း၏သူတို့ရဲ့ hosting အတွက်နှင့်၎င်းတို့၏စည်းမျဉ်းများ. ကလျစ်လျူမရှုနိုင်သလား, ကံကောင်းတာလုံလောက်ငါတို့သည်သူတို့ကိုလက်ခံစရာမလိုပါဘူး.
သင်တိုင်ကြားလိုလျှင်, ဒီနေရာမှာမကျေမနပ်မဖြစ်ကြဘူး, ကြိုးစားနှင့်ဖိုရမ်များအပေါ်တိုင်ကြား, ဒါပေမယ့်ကျနော့်ရဲ့ထင်ကြေးသင်ထိန်းချုပ်မည်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုဖြစ်သည်, wordpress.org ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါ, မတစ်ဦးဟာ GPL, လိုက်နာဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်, အရာအားလုံးအခမဲ့ရှိရပေမည်, ကုန်ကျစရိတ်အတွက်, နှင့်မိန့်ခွန်းတွင်, သင်တို့ကသာလိုလားသောဗားရှင်းမြှင့်တင်ရေးအဖြစ်အစေခံကခြေဆွံ့ plugins ကိုတန်ချိန်တယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်. ဒီသူတို့သည်ငါတို့ Transposh ဘဲထိုအတူပြုကြောင်းအကြံပြုဘာကိုစသည်. ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး, မတ bit နဲ့.
တစ်ဦးမယ့် version ကိုအစဉ်အဆက်က site ကိုမှ Upload တင်ပါလိမ့်မည်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်အင်္ဂါချို့တဲ့ဗားရှင်းဖြစ်လိမ့်မည်, (ဤနေရာတွင်မည်သည့်လင့်ခ်မပါဘဲ, သေချာသည်) မဟုတ်အများစုအတွက်အသုံးဝင်ဗားရှင်း. နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း (မဟုတ်တဲ့ဆွံ့) အပေါ်ညာဘက်ကိုဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လိမ့်မည် download စာမျက်နှာတွင်. ငါတို့သည်ယခု update တစ်ခုယန္တရားကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုရလိ​​မ့်မည်ဟုအရာမှ.
ဤမျှကာလပတ်လုံး wordpress.org, လူအပေါင်းတို့နှင့်ငါးကိုကျေးဇူးတင်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: wordpress.org
မေ 1, 2013 တွင် 11:42 နံနက်
ကမမျှတင်. ငါသည်သင်တို့ဆီသို့ရောက် လာ. , wordpress ကိုအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအကြောင်းဖြစ်ခဲ့. ငါသည်အ wordpress ကို moderator များအတွက်အမှန်တကယ်အလွန်အမင်းစိတ်ပျက်မိပါတယ်. .
Grant က ကပြောပါတယ်
မေ 1, 2013 တွင် 3:48 ညနေ
ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒါမပျော်ရွှင် WordPress ကိုပြောပြရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်နိုင်ပါသည်. ကျနော်အဓိကအားဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင့်တဲ့ plugin က WP ကို​​စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။. 也許你可以開始一項運動，告訴WordPress的我們都沒有太高興了。我開始使用你的插件，主要是因為WP & Google မှာလင့်ခ်. 17 Dreamweaver ကိုသုံးကိုရပ်တန့်ရန်ငါ့ကိုရရန်နှစ်နှင့်နောက်ထပ်နှင့် & WP ကို​​ပြောင်း။. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Transposh ခဲ့သည်. 🙂
မေ 1, 2013 တွင် 5:43 ညနေ
မျိုးစကားတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်က wordpress ကိုဖိုရမ်များကိုဤယူနိုင်ပါသည်, နှင့် moderator များသိစေ, ဒါပေမယ့်ကျွန်မဒီအများကြီးကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမယုံကြည်ကြဘူး.
ကျွန်မသည် non-WordPress ကိုဖြေရှင်းချက်ပိုမြန်ယခုထွက်လာမယ့်လို့ထင်ပါတယ်။.
မေ 1, 2013 တွင် 5:34 ညနေ
wow, ကျနော်တို့တိုင်ကြားနိုင်သောနေရာ, ဒါဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပါတယ်?, ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်??
မေ 3, 2013 တွင် 8:27 ညနေ
သင့်အနေဖြင့် wordpress ကိုဖိုရမ်များအပေါ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်, ငါမူကားမည်သူမဆိုနားထောင်မည်ဟုမထင်ကြ.
မေ 1, 2013 တွင် 10:48 ညနေ
ကောင်းပြီဒီကယ့်သတင်းဆိုးသည်. ငါ WordPress ကိုအဖွဲ့သည်ဤကဲ့သို့သော plugin ကို developer များကုသမမစဉ်းစား. သူတို့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်. သင်ဆိုသည်လိုပဲ, link ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်ယခုအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ပြုနိုင်မည်. ပြသနာကဘာလဲ? သင့်ရဲ့အချက်များကိုတရားဝင်ထက်ပိုငါသည်ငါ၏၏ sites တွေအများကြီးပေါ်မှာသင့်ရဲ့ plugin ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီ, အကြှနျုပျအပိုအသွားအလာတွေအများကြီးဆောင် ခဲ့. အဖြစ်က Google အတွက်ဆိုဒ်များခြေရာကိုတိုးမြှင့်ထားသည့်. ငါသည်ဤ၌သင်တို့ယောက်ျားတွေကို back.
ကလေးသူငယ် Themer ကပြောပါတယ်
မေ 2, 2013 တွင် 9:09 ညနေ
ကောင်းပြီ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ပါသည်. ငါအကြီးအကျယ်သဘောတူညီမှုသည်အဘယ်သို့ရကြဘူး. ငါအနည်းငယ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအသုံးပြုရန်သကဲ့သို့သင်တို့နေဆဲအတွက် plug ကိုကမ်းလှမ်းသည်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်.
ဆိုင်ရာ Francois Lachance ကပြောပါတယ်
မေ 3, 2013 တွင် 3:16 နံနက်
WordPress ကိုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏,wordpress ကိုကောင်းမွန်စေပါသည်ဟုသာအမှုသည်သင်တို့ကောင်လေး၏အရွယ်ကဲ့သို့ developer တွေ၏အသိုင်းအဝန်း,အဘယ်သူသည်ငွေနှင့်အနည်းငယ်သာ recognition.You ကောင်လေးမရှိများအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအများကြီးသွင်းထားဒီ plugin နှင့်အတူကြောက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ် ပြု. သင်သည်ပင်ကံ၏ that.Best ပြီးနောက်ထိုသို့ပြုမှဆက်လက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်
မေ 3, 2013 တွင် 3:34 ညနေ
ဆိုင်ရာ Francois နှင့်သဘောတူ. WordPress ကိုသင်နှင့်တူ developer များမပါဘဲကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏.
မေ 4, 2013 တွင် 2:01 ညနေ
ဒီ wordpress ကိုအုပ်ချုပ် google မှာ Penguin ပြစ်မှုဆိုင်ရာတားဆီးကာကွယ်ရန်နှင့်ပြစ်ဒဏ်ကနေဒီ site ကိုမကယ်တင်ဘို့အကြောင်းစဉ်းစား.
မေ 4, 2013 တွင် 2:20 ညနေ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူး, ငါမူကားအရာကျနော်တို့ wordpress.org နာယကမပါဘဲ google ကိုင်တွယ်ရန်အတော်လေးတျစှမျးနိုငျပါ၏, စ – ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဝစ်ဂျက်များပေါ်တွင် link တစ်ခုရှိသည်ခွင့်ပြု, facebook ကိုမေး, twitter ရောက်ရှိနေသော, ShareThis(ရာထူးအမြန်ဆုံးစာမျက်နှာ 10), များနှင့်အခြားသူများကို
Ana ကယ်လီ ကပြောပါတယ်
မေ 5, 2013 တွင် 9:44 ညနေ
ငါမနှစ်အဘို့သင့် plugin ကိုမသုံးလာခဲ့ကြနားထောင်ခြင်းငှါဒါကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူးငါကိုချစ်သောသူ….
မေ 6, 2013 တွင် 12:42 ညနေ
dudes အဖျားခတ်အပေါ် Keep 😉
မေ 8, 2013 တွင် 2:43 နံနက်
စံချိန်တင်များအတွက်, သင်ကောင်းကောင်းသင့် widget ကအတွင်းက link ရှိသည်ခွင့်ပြုပါတယ်. link ကိုတစ်ဘေးဖယ်-in-link ကိုရှိရမယ် WordPress.org သာပြည်နယ်ပေါ်မှာစည်​​းမျဉ်းများ, မဘေးဖယ်ထုတ်တ.
သင်ဟာသင့်ကြောင်းအထူးသဖြင့်အုပ်ချုပ်မှုကိုလိုက်နာချင်သောဆုံးဖြတ်သောအခါ WordPress.org ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ plugin ကိုရှိသည်ကြိုဆိုပါတယ်.
မေ 8, 2013 တွင် 11:35 ညနေ
ယခုပင်ဖြစ်၏အတိုင်းငါအခြေအနေကိုနှင့်အတူ ok ဖြစ်ကြောင်းကို. ငါရှိသည်အသုံးပြုခဲ့ “ဂုဏ်ယူစွာ wordpress ကိုအားဖြင့်စွမ်းအင်သုံး” ငါ့စာမျက်နှာများပေါ်တွင်, အရာမတော်တဆကျနော်ကို install လုပ်ပြီးပြီဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူကြွလာ (ငါကို default themes များလွန်းရှိပါသည်ထင်, ဘေးဖယ်-၌မ). ဒါဟာနောက်တဖန်မမှု, ငါအများကြီးလျော့နည်းဂုဏ်ယူကြောင့်.
ဤနည်းဥပဒေပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ပါလိမ့်မည်ဆိုရင် (သင်သည်ဤအရပ်၌အနည်းငယ်အသုံးပြုသူများမှတ်ချက်တွေဖတ်နိုင်တယ်, ဒီမျှော်လင့်အကြောင်း, ဒီ ok ဖြစ်ခြင်း, ထွက် singling, စတာတွေ) ကျွန်မပြန်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်.
ငါသည်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ခုခုနှင့်အတူ plugin တစ်ခုပိတ်ပစ်အဲဒီမှာရှိခဲ့ကြောင်းယုံကြည်4နှစ်ပေါင်း, တစ်ဦး gaping လုံခြုံရေးအပေါက်အရာမဟုတ်ပါဘူးမှားလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. ကသာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကငါ bit နဲ့အော့ဖ်လိုင်းခဲ့သည်, နှင့်ဖြစ်နိုင်ကောင်းတစ်ဦးနေစဉ်အဘို့ဤကိုင်တွယ်ရန်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်လို. ငါသည်သင်တို့ကိုပြောပါတယ်မူဝါဒပြန်လည်စဉ်းစားပေးရန်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူကြောင်းအကြံပြုကြပါ (အသိပေးစာပေး, တချို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အချိန်သတ်မှတ်ချိန်, ဘာဖြစ်ဖြစ်). ဒီထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်ကိစ္စကိုဘယ်တော့မှခဲ့, ဒီလိုအင်အားအသုံးပြုမှုကိုလိုအပ်သည်.
သို့သော်, သင့်ရဲ့လိုလိုလားလားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား, နှင့်သင်၏အချိန်, ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းဝေါဟာရအပေါ်အနာဂတ်၌တွေ့ပါမယ်မျှော်လင့်.
စိမ်းလန်းသော Mr ကပြောပါတယ်
မေ 8, 2013 တွင် 12:50 ညနေ
(သင်ဟာသင့်ကြောင်းအထူးသဖြင့်အုပ်ချုပ်မှုကိုလိုက်နာချင်သောဆုံးဖြတ်သောအခါ WordPress.org ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ plugin ကိုရှိသည်ကြိုဆိုပါတယ်။)
ကျေးဇူးတင်စကား Otto ရှိလိမ့်နှင့်ရှင်းလင်းရန်
သတင်းကောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ချစ်ကြောင်း Ofer(ကျွန်တော်တို့၏) plugin ကို
Wolfgang ကို Bloomfield မှာ ကပြောပါတယ်
မေ 8, 2013 တွင် 10:20 ညနေ
မင်္ဂလာပါ, ကိုယ့် transposh plugin ကိုသူများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောချင်တယ်, ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာကိုဖွင်, ငါသည်သင်တို့၏ဆိုဒ်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါပြီ, ငါဂုဏ်ယူစွာသင့် link ကိုပြသနေတဲ့ပါ၏.
သင်တို့ကိုနှုတ်ကိုအချက်ပြခဲ့ကြအဘယ်ကြောင့်ငါနားမလည်နိုင်တော့ဘူး, များစွာသော plugins တွေဟာသူတို့ထံမှ၎င်းတို့၏ site ကိုမှလင့်ခ်ရှိသည်အဖြစ်, တကအခမဲ့ plugin ကိုဖြစ်သကဲ့သို့ယင်းနှင့်အတူမှားတစုံတခုမျှမရှိ, ဒါကြောင့်သင်ကအနည်းဆုံးကနေ link တစ်ခုရသင့်.
Niels ယာကော့ဗ် ကပြောပါတယ်
မေ 9, 2013 တွင် 10:56 နံနက်
သင့်ရဲ့အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် – ငါတကယ်သင့် plugin ကိုခံစားပျော်မွေ့, သင်တို့ကိုငါမကြာမီနောက်ကျော WordPress ကိုပေါ်မှာရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်. အချိန်အတောအတွင်း, အဘယ်သို့ငါအပြည့်အဝ version ကို update ပါဘူး? (ငါကို default ထက်အခြားဝစ်ဂျက်များလိုအပ်) ကျွန်မက WP plugin ကို uninstall လုပ်မယ်သင့်ပါသည်, နှင့်သင့်ကို download အပိုင်းကနေ plugin ကို install လုပ် ကို download လုပ်ပါ? သို့မဟုတ်ငါ့လက်ရှိဘာသာပြန်ချက်များကိုအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုပယ်ဖျက်လိမ့်မည်ဟု?
မေ 9, 2013 တွင် 1:05 ညနေ
ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့ဘာသာပြန်ချက်များကိုပယ်ဖျက်ပေးပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, သင်အကြံပြုလမ်းကိုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်. အခြားသောလမ်းသော်လည်းရှိပါတယ်
1. wordpress.org ကနေဗားရှင်းမြှင့်တင် 0.9.3
2. setting ကိုကိုသွားပြီးစစ်ဆေး “အပြည့်အဝဗားရှင်းမြှင့်တင်”
3. နောက်တဖန်အအဆင့်မြှင့်တင်စစ်ဆေးပါ (သင်သည်ဤအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရန်ရှိသည်စေခြင်းငှါ,)
4. အပြည့်အဝဗားရှင်းမြှင့်တင် (ယခု 0.9.3.1)
မေ 9, 2013 တွင် 2:23 ညနေ
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် – ငါသည်သင်တို့၏နောက်ဆုံးအကြံပြုချက်အသုံးပြု, ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်ခဲ့!
မေ 9, 2013 တွင် 2:45 ညနေ
ကျွန်မမတော်တဆတိုးမြှင့် 0.9.3 wordpress ကို repository ကိုကနေတဆင့်, သို့သော်ယခုအလံပျောက်ဆုံးနေ. သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဒါ Uninstall နဲ့ download လုပ်ဗားရှင်း. plugin ကို install လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, အဘယ်သူမျှမခိုင်လုံတဲ့ plugins ကိုတွေ့ရှိကပြောပါတယ်. ယခုငါကျွန်ုပ်တို့၏ site ထဲကသင့်ရဲ့ဘာသာပြန် tool ကိုပျောက်ဆုံးနေပါ၏.
မေ 9, 2013 တွင် 3:18 ညနေ
ဒီစစ်ဆေးပေးလိမ့်မယ်, သို့သော်, ထို repository မှမြှင့်တင်အားမည်သို့အပေါ်မှာငါ့အခြား comment ကိုဖတ်ပါ.
မေ 9, 2013 တွင် 3:29 ညနေ
hi, သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်ကိုကျေးဇူးတင်စကား. ငါသည်သင်တို့၏ download စာမျက်နှာတွင်မှာပြန် check လုပ်ထားတဲ့အခါငါကိုငါမြင်၏ 0.9.3.1 link ကို. ငါသည်အထဲကဖိုင်တွေကိုဖျက်ပစ်ခဲ့ 0.9.3 ပြီးတော့ install လုပ်ပါ 0.9.3.1. ဒါဟာယခုဒဏ်ငွေလုပ်ဆောင်နေသည်, ပြန်ပေးရအလံများနှင့်အတူ. ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်, ငါ WordPress ကိုနှင့်အတူအခြေအနေစိတ်မကောင်းပါဘူး.
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကမ္ဘာတဝှမ်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါဌ်တော်ပြန့်နှံ့, သင်တို့ကိုငါသင့်ဘာသာပြန်ချက်အင်ဂျင်ကိုကယ်တင်ခံရစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမှတစ်ထပ်တည်းကြောင်းကိုသိလို.
Sushyant Zavarzadeh ကပြောပါတယ်
မေ 13, 2013 တွင် 5:21 ညနေ
wordpress ကို transposh မရှိဘဲပေါင်းစုံဘာသာစကား CMS မဖြစ်နိုင်! wordpress ကိုရှိသော်လည်းထိုသူအပေါင်းတို့အဘို့များစွာသောဘာသာပြန်ချက် plugins ကိုရှိပါတယ်ငါ Transposh သုံးပြီးနှင့်သင်သည်ဘာသာစကား Persian ထောက်ခံမှုများအတွက်ကူညီမှုအတွက်ဒါပျော်ပါတယ်😀အသုံးများမှာ. 🙂
မေ 18, 2013 တွင် 11:38 ညနေ
Ofer ဟေ့, ယင်း၏သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိ🙂
ရုံသင်တို့သည်ငါပြန်ပြီးတော့ server ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ fixed ဗားရှင်း reuploaded သောအခါ, ငါ၏ကိစ္စကို fixed ခဲ့သည်ကိုသိကြစေ, မသေချာဘယ်လိုသို့မဟုတ်ဘာကြောင့်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကို fixed.
ယခုငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ plugin ကို WordPress ကိုမှဖယ်ရှားခံရကြောင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းကြည့်ရှု, တကယ်ညှိုးငယ်, ငါတကယ်နှစ်ဖက်စလုံးဒီနားလည်မှုလွဲမှားအပေါ်တစ်ဝက်လမ်းအနည်ထိုင်ခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံသင့်စဉ်းစား, လူတိုင်း၏မျက်နှာကို ထောက်. ,.
ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှအဆင့်မြှင့်, ယခုအထိတော့အဆင်ပြေတုန်းပဲ, ယခင်ပြဿနာတတ် resurface မျှော်လင့်တဲ့ stats နဲ့ traffic စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်.
မေ 19, 2013 တွင် 12:04 နံနက်
မေ 27, 2013 တွင် 9:18 နံနက်
ထို Transposh plug-in ကိုသူများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. အဆိုပါ WordPress ကိုအုပ်ချုပ်မှုကိုကမမျှတပါဘူး. ငါသည်သင်တို့၏ဘက်မှာလုံးဝင်. အပြည့်အဝဗားရှင်းအဆင့်မြှင့်ဂုဏ်ယူစွာပြသ “Transposh ကြောင့်ထားသော” link ကို.
သင့်ရဲ့ plug-in ကိုအသုံးပြုခြင်းမှအများဆုံးအဆင်ပြေပါသည်.
ဇွန်လ 24, 2013 တွင် 10:37 ညနေ
plugin ကိုဆဲနေပြီ plugin ကို install လုပ်သောသူနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုစာနယ်ဇင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်, သင်တစ်ဦးကို un တာဝန်ရှိသူတဦးက repo ကနေ download link များကိုနိုင်စေခြင်းငှါ…?!
ဇွန်လ 24, 2013 တွင် 10:40 ညနေ
ထို wordpress ကို repository မှာ download လုပ်နိုင်တဲ့ဒီနေရာမှာဦးဆောင်, သင်တို့ကိုအပြည့်အဝကို download version ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်, တစ်ခုနှင့်အဆင့်မြှင့်လုပ်ဆောင်, တနည်းအားဖြင့်သင်သည်ဤအရပ်၌ download စာမျက်နှာတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
ဇွန်လ 26, 2013 တွင် 2:15 ညနေ
ကနေ update ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း http://svc.transposh.org/transposh.latest.zip…
ဇွန်လ 26, 2013 တွင် 2:29 ညနေ
သင့်ရဲ့ server ပေါ်မှာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့ထားပါသည်, ကို manually ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲကြိုးစားသင် file ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကိုတွေ့မြင်ရကျေးဇူးပြုပြီး
သြဂုတ်လ 15, 2013 တွင် 7:59 ညနေ
ကျွန်တော်သဘောတူသည်. WordPress ကိုဝန်ထမ်း, အဖြစ်ဝေးကိုယ့်သဘောပေါက်သွားပါပြီအဖြစ်, တကယ်ကအလွန်ဆိုးရွားအလုပ်လုပ်နေ.
သူတို့ကသင့်ရဲ့ forum ကိုသူတို့က 'ပထမဦးစွာဖြစ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကြောင့် delete’ သင့်ရဲ့အဖြေကိုမပြည့်စုံကြောင်းကို reply သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ (ငါသည်သင်တို့ကိုပေးနိုင်2အမည်များ, ဒါပေမယ့်ငါမကြိုက်တတ်တဲ့င့်) နှင့်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် profile များကိုချိတ်ဆက်နေဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေးဆောင်န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ချင်တယ် (ဟုတ်ပါတယ် ..). ဒီ WordPress ကို၏တစ်ခုတည်းသောအနက်ရောင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, ဤသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။.
-Dave ရဲ့ Main ကပြောပါတယ်
သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 2:28 ညနေ
သင်လိုလားတဲ့ဗားရှင်းမြှင့်တင်ကျိုးပဲ့ plugins ကိုအကြောင်းအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသိကြ. ထိုသို့တဦးကိုကြင်နာစွာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို – တိ.
အကြိုက်ဆုံးသင့် site Will. ခြေရာခံစောင့်ရှောက်မည်. Fantastic Translator.
သင့်ရဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့သည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေအကောင်းဆုံးပင် 2nd မဟုတ်.
သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 10:34 ညနေ
သူ Mike ကပြောပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 20, 2013 တွင် 4:31 ညနေ
သင်ယောက်ျားတွေဒီ plug-in ကိုထဲသို့သွင်းထားပြီဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းပမာဏအလွန်အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်.
ငါသည်အ non-profit ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြဘူးငါသည်လည်းသင်တို့၏ plug-in ကိုအကြှနျုပျတို့ဟစ်စပန်းနစ်လူဦးရေ၏တွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူညီပေးခဲ့သည်ဘယ်လောက်သင်မပြောနိုင်.
ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေ Bravo… WP ကခက်ခဲသင်ကိုယ်တိုင်မြှင့်တင်ဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီဘယ်လောက်ပဲအရမ်းဆိုးကန်.
ငါသည်သင်တို့ကိုအကြံပြုရလိမ့်မည်, သေချာသည်. ခံတွင်း၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အကောင်းဆုံးမြှင့်တင်ရေးသည်.
Bogdan မုန်တိုင်း ကပြောပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 31, 2013 တွင် 2:47 နံနက်
ဤနယ်ပယ်တွင်ထားခဲ့ပြီးမှ Transposh အသက်ရှင်လျက်မစောင့်မရှောက်ကြပါ ကျေးဇူးပြု..
သင်တို့ကိုအလိုရှိလျှင်ကျွန်တော်အမြတ်အစွန်းအောင်ခန့်စကားပြောနိုင်သည်ငါနှင့် ပတ်သက်. အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်.
သင်သည်သင်၏အလုပ်မြှင့်တင်မှ WordPress ကို website မှာမလိုအပ်ပါဘူး.
ထူးချွန်ထက်မြက်အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်သင့် plugin ကိုကျွန်မကတည်းကမြင်ကြဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုအောင် … အစဉ်.
ဇန္နဝါရီလ 15, 2014 တွင် 6:45 ညနေ
မတ်လ 17, 2014 တွင် 11:03 ညနေ
ဟေ့, ငါသည်သင်တို့၏ plugin ကိုတစ်ကြယ်တစ်ပွင် rating ထရှိရာ WP.org site ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေ LOVE. သင်သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအဘို့သင့်စိတ်အားထက်သန်ဤထင်မြင်ချက်များတွင်ထင်ဟပ်နေသည်. ကကပ် @.
ဂျိမ်း Hilliard ကပြောပါတယ်
ဇွန်လ 2, 2014 တွင် 4:19 ညနေ
wordpress ကိုမှာ mods ကယ့်ကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းဤလုပ်ကြံပြန်လည်စဉ်းစားသင့်တယ်. သင်ထောက်ပြအဖြစ်… တိုင်း share button နောက်ထပ်ရဲ့ site link တခုကိုဖြစ်ပါသည်. The Facebook plugins ကိုဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်… သင်တို့ကို Google Translator EVERYPAGE ဆိုင်ရာစာအုပ်ပြင်ပကမ္ဘာပြန်လည်စုစည်းဖို့ရာကြိုးစားကြည့်ပါမည်ကဲ့သို့သတ္တိရှိရင်!!!
ဇူလိုင်လ 10, 2014 တွင် 8:12 ညနေ
:အဆိုပါ :အဆိုပါ :အဆိုပါ :အဆိုပါ :အဆိုပါ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2015 တွင် 4:28 ညနေ
ယောက်ျားတွေ “အံ့ဩဘွယ်အလုပ်!” ငါသည်သင်တို့၏ plugin ကိုကိုချစ်နဲ့ကျွန်မမှန်သည်အဘယ်ကိုတက်ရပ်နေသည်ကိုအဘို့သင်တို့စိတ်နေစိတ်ထားကိုချစ်!
Wordpress ကိုသင်တို့အဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်တူ plugins တွေဟာမပါဘဲ wordpress ကိုမဖြစ်လို. Facebook ကိုသင်ကပြောပါတယ်လိုပဲ, ခုနှစ်နှင့်ဆက်စပ်မှု, Twitter ကို, Google က…ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်မသင်က link ကိုပြန်စောင့်ရှောက်နေရ?
ငါဖြစ်၏ 100% သင့်နောက်, ငါသည်သင်တို့၏ plugin ကိုပြသဖို့ကိုငါသည်လည်းသင်တို့၏ link ကိုပြသ! ခရက်ဒစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်အဘယ်အရပ်ကရက်ဒစ်ပေးစေခြင်းငှါထိုက်တန်ပါတယ်. သင်တို့သည်ဤမျှလူအတော်များများသင့် plugin ကိုအသုံးပြုကြပါစို့ဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသည်နှင့်သင်အဘို့တိုင်း bit နဲ့ထိုက်တန်တဲ့! ဒါဟာ wordpress ကိုမှာလူတွေဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုထဲသို့ဝင်ကြောင်းကိုခက်တဲ့အလုပ်တန်ဖိုးမနိုင်ငါ့အ amazes င်. သင်သည်ဤလူအပေါင်းတို့ကိုစဉ်းစားမယ်လို့, သူတို့အများဆုံးကြောင်းနာ​​းလည်မယ်လို့. နောက်ဆုံးတော့, WordPress ကိုသင့်ရဲ့အလုပ်ကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်, ရှိသမျှတို့သည်အ WordPress ကိုသုံးစွဲသူများကသင့်အလုပ်ကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေကြသည်, ဒါကြောင့်…သင်သည်အဘယ်ကြောင့်မသင့်ဘူး? ကျွန်မဂုဏ်ယူစွာပြန် link ကိုနဲ့ငါ့ site ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ plugin ကိုစောင့်ရှောက်မည်! ထိုနောက်မှငါသည်အလားတူလုပ်ငါ့အလိုရှိသမျှကျောင်းသားတွေပြောလိမ့်မည်ဟု. သင်ပိုမိုထိုက်တန်သူဖြစ်ကြောင်း. Long ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဒီမိုကရေစီ!!!! 🙂
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2015 တွင် 7:29 ညနေ
လုံးဝဟုသင်တို့ဆိုရှိသမျှနှင့်အတူသဘောတူ, အဆိုပါပျား! ကျွန်မလည်း Transposh ရဲ့သဘောထားကိုချစ် …ငါကျိန်းသေသာကျွန်တော့်ကို install လုပ်ပြီးဖွင်သောဤတောက်ပသော plugin ကိုကိုချစ်နှင့်လှပစွာအလုပ်လုပ်တယ်!
အရောင်းခွန်, Transposh, ကျွန်မဘယ်နေရာမှာမဆိုမည်သည့်လှူဒါန်းခြင်း paypal အ button ကိုမမြင်ရပါဘူး?? ငါသည်သင်တို့ကိုတဦးတည်းမလိုအပ်စဉ်းစား🙂 …နှင့်ဤလှပသော plugin ကိုကျေးဇူးတင်ဤမျှလောက်!
သို့မဟုတ် najeb ကပြောပါတယ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2015 တွင် 11:28 နံနက်
မမျှတကြောင်း. ဒီ plugin ကိုငါ့အဘို့အကောင်းဆုံးခဲ့ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးကသုံးပြီးစောင့်ရှောက် gnna ပါဘူး wordpress လိုအပ်ပါတယ်နော်နော်, နှင့်ဦးညာဘက်သူတို့နှင့်အတူ ur အလုပ် appreiate သောသူတို့သည်ပြုပါခင်ဦးကသတိပေးသင့်ပါတယ်, တကယ်ဆိုးကြောင်း
Ethan Sanabria ကပြောပါတယ်
ဇွန်လ 5, 2015 တွင် 9:02 ညနေ
ကောင်းပြီဒီယူတာပဲ. တကယ်ကဒီ plug-in ကိုတူ! လက်တင်အမေရိကသို့ချဲ့ထွင်ရန်ရှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီ, Transposh အစီအစဉ်၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်. ကိုယ့်ဝမ်းမြောက်စွာထိုသို့ပေးဆောင်မယ်လို့!
အလွန်စိတ်ပျက်စရာ, WordPress ကို!!!